ကောင်းသောအကျင့် | အမေးများအတွက် အဖြေလွှာ
ကောင်းသောအကျင့်	December 10, 2009
Filed under: ရခဲမွန်မြတ်လူ့ဘ၀ — amayaphay @ 8:56 am
ကောင်းတာလုပ်ရင် ကောင်းရာသို့ ရောက်လိမ့်မည် မဟုတ်ပါလား?
မဟုတ်ပါ။ ထာဝရဘုရား၏သမ္မာကျမ်းစာတော်မြတ်တွင် ယေရှုဘုရားအား ဖြင့်သာ လူသားတိုင်း ကောင်းရာသုခဘုံသို့ရောက်ရာ တစ်ခုတည်းသောလမ်း ဖြစ်သည် ဟုဖေါ်ပြထားပါသည်။ အမြင်ကျဉ်းမြောင်းသော အယူဝါဒဟု ထင်ပါသလား။ ထာဝရ ဘုရား၏ သမ္မာကျမ်းပါ တရားသုံးပါးတွင် အဖြေရှိပါသည်။ သမ္မာကျမ်းအကြောင်းကို ဦးစွာဖေါ်ပြပေးလိုပါသည်။ (ယော ၁၄း၆)
သမ္မာကျမ်းစာကို မည်သူကမည်သည့်အချိန်တွင် အဘယ်ကဲ့သို့ ရေးသားခဲ့ ကြပါသနည်း ?
သမ္မာကျမ်းစာဟု ဆိုလိုက်သည်နှင့် လူတို့က ခရစ်ယာန်တို့၏ ကျမ်းဟု ထင်တတ်ကြပါသည်။ သို့သော် သမ္မာကျမ်းကိုဖွင့်လိုက်ပါက မည်သည့်ဘာသာ မည်သည့်လူမျိုး၏ ကျမ်းဟုမပါဘဲ ဓမ္မသစ်နှင့်ဓမ္မဟောင်းကျမ်းတည်းဟူသော ထာဝရဘုရား၏ သမ္မာကျမ်း ဟုသာဖေါ်ပြထားပါသည်။
ထာဝရဘုရားရှင်ကိုယ်တော်တိုင်က သူ၏ သန့်ရှင်းသူ လူပေါင်းလေးဆယ် ခန့်ကို အသုံးပြုပြီး ရေးသားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ရေးသားသူတို့နှင့် ရေးသားကြသော အချိန်၊နေရာဒေသမတူကြပါ။ တစ်ဦးနှင့် တစ်ဦးတိုင်ပင်မှုလည်းမရှိ၊ အဆင့်အတန်း အလွှာခြင်းလည်း မတူညီကြပေမည့် သူတို့ အားလုံး၏ ရေးသားချက်များမှာ ရည်ရွယ် ချက်၊ ဦးတည်ချက် တစ်ခုတည်းဖြစ်၍ ရှေ့နောက်ညီညွှတ်မှုလည်း ရှိပါသည်။
ဓမ္မဟောင်း (၃၉) ကျမ်းကို စာပေစတင်တီထွင်အသုံးပြုချိန်ဖြစ်သည့် ဘီစီ (၁၅၀ဝ) ခန့်တွင် စတင်ရေးသားခဲ့ပြီး နောက်ဆုံး ရေးသားချိန်မှာ ဘီစီ (၄၀ဝ) ဖြစ်ပါ သည်။ ဓမ္မသစ်ကျမ်း(၂ရ)ကျမ်းကို အေဒီ(၄၀) နှင့် အေဒီ(၉၀) ကြားတွင်ရေးသားခဲ့ပြီး မူလလက်ရေးမူများကို အေဒီ(၁၃၀) တွင်ပြန်လည်အက္ခရာတင်ခဲ့ပါသည်။ ထို့ကြောင့် သမ္မာကျမ်းစာကို ရေးသားချိန်မှာ နှစ်ပေါင်း ၁၆၀ဝ ခန့်ကြာမြင့်ပါသည်။
လူပေါင်းလေးဆယ်ခန့်ရေးသားခဲ့သော (၆၆) ကျမ်းပါ သမ္မာကျမ်း စာအုပ်သည် ခေတ်အဆက်ဆက် ရောင်းအကောင်းဆုံး နှင့်လက်ဆောင်ပေးမှု အများဆုံး ဖြစ်ပါသည်။ လူသားတိုင်းဖတ်သင့်သောစာအုပ်ဖြစ်၍ သမ္မာကျမ်းစာတော်မြတ်ကို ဘာသာစကားပေါင်း (၂၅၀ဝ) ခန့်ဖြင့် ဘာသာပြန်ပုံနှိပ်ဖြန့်ချီခဲ့ပြီး ဖြန့်ချီနေဆဲ ဖြစ်ပါသည်။ ခောတ်အဆက်ဆက် မလိုလားသူတို့၏ ဖျက်ဆီးခြင်းကို ခံရသော်လည်း ပျောက်ပျက်သွားခြင်းမရှိခဲ့ပါ။ အစဉ်အမြဲခေတ်မှီနေပြီး ဘယ်နှစ်ကြိမ်ဖတ်ဖတ် မရိုးနိုင်သော စာအုပ်လည်းဖြစ်ပါသည်။
သမ္မာကျမ်းစာတော်မြတ်သည် အသက်ရှင်၍ တန်ခိုးနှင့်ပြည့်စုံတော်မူပြီး လူသားတိုင်း၏ အပြစ်ကိုဖေါ်ပြပေးကာ ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သို့ရောက်ရန် လမ်းညွှန်မှု ကိုပေးသောစာအုပ်ဖြစ်ပါသည်။ စာတန်မာရ်နတ်၏ စုံစမ်းနှောက်ယှက်မှုများကို အောင်မြင် နိုင်ရန် လမ်းပြသောစာအုပ်ဖြစ်၍ ကမ္ဘာပေါ်တွင် စာတန်မာရ်နတ်အမုန်းဆုံး စာအုပ်လည်းဖြစ်ပါသည်။ စိတ်ကျန်းမာရေး၊ နိုင်ငံရေး၊ စီးပွါးရေး၊ လူမှုရေး၊ ပညာရေး၊ အားလုံးတို့ကို လမ်းညွှန်မှုပေးသောစာအုပ်ဖြစ်ပြီး သိပ္ပံပညာရှင်အများစု ကလည်း သိပ္ပံပညာနှင့် ကိုက်ညီမှုရှိသောစာအုပ် ဖြစ်ကြောင်း မှတ်တမ်း တင်ခဲ့ပါသည်။
သမိုင်းကို အဓိကထားသောစာအုပ် တစ်အုပ်မဟုတ်သော်လည်း လူသားတို့ ၏ အစနှင့် ခောတ်အဆက်ဆက် မည်ကဲ့သို့တိုးပွါးလာပြီး ဘာသာစကားနှင့် တိုင်းနိုင်ငံ များမည်ကဲ့သို့ ပေါ်ပေါက်လာခြင်းသာမက ကမ္ဘာမြေကြီး သည် အဘယ်ကဲ့သို့ အဆုံး သတ်မည်ဆိုသည်အထိ စုံလင်စွာရေးသားထားသော တစ်ခုတည်းသော စာအုပ်ဖြစ်ပါ သည်။ သမ္မာကျမ်းပါ အဖြစ်အပျက်အကြောင်းစုံကို သမိုင်းသုတေသီ ပညာရှင် များစွာတို့၏ တူးဖေါ်တွေ့ရှိချက်များနှင့် သုတေသနပြုချက်များအရ သမ္မာကျမ်းပါ သမိုင်းအကြောင်းအရာ များတို့သည် မှန်ကန်ကြောင်း ထောက်ခံခဲ့ကြပါသည်။
သမ္မာကျမ်းတွင် ဖြစ်ပျက်လာမည့် အကြောင်း အရာတို့အား ကြိုတင်ပရောဖက် ပြုချက်ပေါင်း (၆၀ဝ၀) ကျော်ရှိသည့်အနက် တစ်ဝက်ကျော်မှာ ပြည့်စုံလာခဲ့ပြီး ကျန်ပရောဖက်ပြုချက်များလည်း မကြာမှီပြည့်စုံလာမည် ဖြစ်ပေသည်။
သမ္မာကျမ်းစာတော်မြတ်ကို လူအချို့က ခောတ်အဆက်ဆက် ပြုပြင်ဖြည့် စွက်ကာ ရေးသားခဲ့ကြသည် ဟု စွပ်စွဲခဲ့ကြပါသည်။ သို့သော် သမ္မာကျမ်းကို ဗိန္ဒု (ရှေ့ကပေါက်၊သေးသေးတင်) တစ်လုံးမျှပင် အသစ်သွင်းခွင့်မရှိသလို နှုတ်ပယ်ခွင့် လည်းမရှိကြောင်း နှင့် ထိုကဲ့သို့ပြုလုပ်ပါက ထာဝရဘုရားထံမှ ရရှိမည့်ကောင်းကြီး မင်္ဂလာများဆုံးရှုံးကာ ကျိန်ခြင်းကိုခံရမည်ဟု သမ္မာကျမ်းတွင်ပညတ် ထားပါသည်။ သမ္မာကျမ်းစာတော်မြတ်ကို မူရင်း အဓိပ္ပါယ်မပျက်စေပါဘဲ စကားပြေဖြင့် ဘာသာပြန် ရေးသားခဲ့ကြခြင်းသာလျှင် ဖြစ်ပါသည်။ ပြုပြင်ဖြည့်စွက်ထားခြင်းမဟုတ်ပါ။
သမ္မာကျမ်းစာတော်မြတ်တွင် အကြောင်းအရာ မျိုးစုံပါဝင်သော်လည်း ထိုစာအုပ်တစ်အုပ်လုံး၏ အ”ဓိက ပုဂ္ဂိုလ်မှာ ယေရှုဖြစ်ပါသည်။ ယေရှုဘုရားလောကသို့ ကြွဆင်းလာမည့် အကြောင်း၊ ယေရှုဘုရားလောကသို့ကြွဆင်းလာခြင်း၊ လူတို့ အပြစ် အတွက် ယေရှုဘုရားအသေခံခြင်း၊ ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်း၊ ယေရှုဘုရား ကောင်ကင်ဘုံ သို့တက်ကြွသွားခြင်း၊ ယေရှုဘုရားဒုတိယအကြိမ် လောကသို့တဖန်ကြွဆင်းလာမည် အစရှိသည်တို့ဖြစ်ပါသည်။
သမ္မာကျမ်းကို လူတို့က ဘယ်လိုရပြီးရေးသားခဲ့ကြသည်ဟုဆိုရာတွင် ဘုရားသခင်၏ စကားသံတော်အားဖြင့်၎င်း၊ ယေရှုဘုရား၏ သက်တော်စဉ်နှင့် တရားစကားတော်များအားဖြင့်၎င်း၊ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဘုရားက သူ၏သန့်ရှင်း သူတို့ကို ဖေါ်ပြပေးခြင်း အားဖြင့်၎င်း၊ ကောင်းကင် တမန် တို့၏ ဖေါ်ပြချက်တို့ကို ရခြင်းအားဖြင့်၎င်း၊ ဘုရားသခင်၏လူများက ရေးသားခဲ့ကြခြင်းဖြစ်ပါသည်။
ယနေ့ ကမ္ဘာပေါ်တွင် ပေါ်ထွန်းခဲ့သော ကမ္ဘာကျော် စာရေးဆရာများ၏ အကောင်းဆုံးလက်ရာများတို့ကိုစုစည်းကာ စာအုပ်တစ်အုပ်ပြုစုပြီး ရေးသားထုတ်ဝေခွင့် ရခဲ့လျှင်ပင် သမ္မာကျမ်းစာကိုကားလုံးဝမှီနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ အကြောင်းမှာ အနန္တ ဥာဏ်တော်ရှင် ဘုရားသခင်ကိုယ်တိုင်က ရေးသားထားသော စာအုပ်ဖြစ်၍ ဖြစ်ပါသည်။
သမ္မာကျမ်းစာတော်မြတ်တွင် ကျမ်းပေါင်း (၆၆) ကျမ်းပါဝင်သော်လည်း တရားသဘော အနှစ်ချုပ်မှာ အပြစ်တရား၊ ပညတ်တရား နှင့် ကျေးဇူးတရားဟူ၍ တရားသုံးပါးသာရှိပါသည်။ ဘာသာမရွေး ၊ လူမျိုးမရွေး၊ အရွယ်မရွေး၊ လူသားတိုင်း သိရမည့် ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တရားတော်များ ဖြစ်ပါသည်။
One Response to “ကောင်းသောအကျင့်”